FBC - Kana booda federeeshinicha amanuun rakkisaadha –Biiroo Dargaggoo fi Ispoortii Oromiyaa
Kana booda federeeshinicha amanuun rakkisaadha –Biiroo Dargaggoo fi Ispoortii Oromiyaa
Finfinnee, Hagayya 6,2009(FBC)- Taphni priimiyar liigii Ityoophiyaa 30ffaan Waxajjii 17 morkatamee ture dubbii cimseera.
Taphni Kilaba Bulchiinsa Magaala Hawaasaa fi Elektirikii gidduutti turemmoo Kilaba Jimmaa Abbaa Bunaa miidhuu isaa ragaa muraasaan akka bira ga'ame kilabichis Biiroon Dargaggoo fi Ispoortiis kan himu.
Geggeessaan Kilaba Jimma Abbaa Bunaa obbo Kabbadaa Girmaa, kilbni isaanii akka dhidhimuuf Elektiriikii fi Hawaasaan fokkoo hojjataniiruu dubbatan.
Taphattoonni isaanii aadaa kubba miilaa cabsu mul'isaniiru.
Utuu Hawaasaan tokko qixa ba'uu baatee mo'ee, Jimmi Abbaa Bunaa hin dhidhimu ture.
Deemsa seeraan alaa mul'ateen kufaatiin nurra ga'eeras jedhu.
Akki ta'etu taphattoonni kilaboota lammanii waliin haasa'anii tapha burjaajessuu yaalaniiru.
Koreen Qorataa Federeeshinii Kubba Miilaa Itiyoophiyaa dhimmichaaf hundaa'e adeemsa sakatta'iinsa isaatiin yaaliin akka ture bira ga'eera.
Korichi Hawaasaa dhaqee taphattoota,poolisii magaalittii fi naannichaa,hoggansa kilabichaatis dubbisee gabaasa gar-tokkee qindeeffadhe kan jedhu ibsuusaa ni yaadanna.
Taphattoonnni kilaba bulchiinsichaa afur ga'an gocha kana keessaa harka hin dhabaniin shakkaman.
Taphattoonni amanuu isaanitiin dursanii akeekkachiifnii fi to'annoon waan taasifameef, yaaliin suni taphicharratti dhiibbaa hin uumne jedha koreen dhimmicha qorate.
Hogganaan Biiroo Dargaggoo fi Ispoortii Oromiyaa obbo Mootummaa Tamasgeen sababa Kilabichi dhidhimeef taphattoonni kilabichaa gadi lakkisuutti ce'aniiruu hima.
Biiroon Dargaggoo fi Ispoortii kanarraa ka'ee, bara dhufutti dorgommiiwwan gosa kamuu dhiisuun danda'a yoo jedhu, Biiroon Dhimmoota Kommunikeeshiniitis fuulleetti qabatee ba'eera.
Sababa Kilaboota lammaanitiin Jimmi Abbaa Bunaa akka dhidhimu ta'eera jechuudhan geggeessaan Kilabichaa obbo Girmaa Kabbadaa, nuti ragaa qabna; guyyaa shan dura bilbilaan natti himaniiru jedhu.
Federeeshinii Kubba Miilaa Itiyoophiyaa Koree qorataa hundeessudhaan dhimma kilaba Hawaasaa fi Elektiriikii gidduutti ta'e sakatta'aa ture kamisa darbe ibsaan gadi baasera.
Gabaasa qopheeffatee miidiyaaleef dhiheesse kanaan waa'ee kilaba Jimma Abbaa Bunaa kaasuuf hin barbaanne ture.
Xalayaa Kilabiin Jimma Abbaa Bunaa isaaniif barreesse koreen qorataa kuni akka odeeffannootti akka itti fayyadame eerera.
Kana caalaa jabaatee kan hojjatummoo qaama haqa qulqulleessu koree naamusaa federeeshinichaa ta'uu akeekeras.
Waxabajjii 17 sana morkii Piriimeerliigiitiin Jimmi Abbaa Bunaa Dirre Dawaan injifamee qabxii 32 qaburratti hafe.
Elektiriikiinis qabxii 32 qabu sanaan Hawaasaa dhaqee,qixas ba'ee qabxiisaa 33'n ga'atee darbuuf milkaa'e.
Adeemsa taphichi injifannoo Hawaasaatiin akka hin xumuramne,Jimmi Abbaa Bunaa kufee Elektiriikiin piriimeerliigiitti hafu taasise seeraan ala kan deemmame qabaa dubbiin kan jiru.
Geggeessaan Kilaba Jimma Abbaa Bunaa obbo Girmaa Kabbadaa waxabajjii 17 dursuun taphni Kilaba Bulchiinsa magaala Hawaasaa fi Elektiriikii burjaaja'uuf akka ta'e mallattoolee arganneen yaa hordofamuu federeeshinii kubba miilaatti barreessineerraa dubbatani.Tapha boodas xalayaa danuun gara federeeshinichaa dhufaniiru.
Xalayoota isaan kataban sana keessaa kanneen tapha boodaa muraasni gabaasaa FBC harkas galaniiru.
Taphattoota taphicha burjaajessuuf yaalan jedham keessaa kan gaafas tapharratti hin hirmaatinii fi taphattoota qindessera jedhamuun shakkame Efreem Zakkaariyaas kilabichi adabbii waggaa sadii kubbaarraa dhaabuu fi qarshii kuma 25 itti mure.
Federeeshinichimmoo akka qorannoo kiyyaatti murtoon suni ragaa utuu hin qabaatin callisumaan murteesse kan jedhurra ga'eera.
Taphattoonni Kilabii Elektiriikiis yemmuu dubbifamanitti taphattoonni yaalii qabxii jijjiiruu keessa galaniiru jedhaman qoosaaf akka dubbatan himan.
Jarri maallaqa hammanaa walirraa fudhanna kan jedhuuf nu hin geessifnee ragaa naaf ba'anii kaawwate koreen qorataa federeeshinichaa.
Taphattoonni dursanii taphicha burjaajessuuf yaalaniiru jedhaman kan Kilaba Elektiriikiis ta'ee Hawaasaa biyya keessa waan hin jirreef Koreen Qorannoo federeeshinichi hundeesse isaan dubbisuu akka hanqate himeera.
Kilabiin Jimma Abbaa Bunaa Carraaqqii isaatiin bilbiloota taphattoota shakkamanii,irra deddeebinis odeeffannoo waljijjiiraa turanii Itiyoo Telekoom irraa gaafatee argateera.
Sanammoo Federeeshinichi itti dhimmee sagaleen jara kanaa waraabames yoo jiraate akka dhaggeeffatu ol iyyate.
Sagalee bilbilaan haasa'ame sanammoo yoo jiraates kan jedhuun Federeeshinchi hamma yoonaa of harka galfatee caqasuu hin yaalle.
Pirezidantiin Federeeshinichaa obbo Junaddii Baashaas Koreen Qorannoo geggeessesn isuma dubbate.
Akka dubbii Koreen Qorannootti haala irra ga'ametu ibsame malee qorannoon waan xumuramee miti.
Kilabiin Jimma Abbaa Bunaa ammallee deebii hatattamaa naaf yaa laatamuu gaafata. Obbo Girmaa Kabbadaa hin ta'aa fi lakkiin hin argamne jedhu.
Ibsa dheengadda koreen qorannoo federeeshinichaa baases nu buratti fudhatama kan qabu mitii dubbatan.
Dambiin ittiin bulmaata federeeshinichaatuu shakkiirraa ka'ee waan murteessu akka qabu akeeka jedhan obbo Girmaan.
Xalayee federeeshinichaaf barreessan keessatti haala dambii keewwata 45,47,70 tiin nuuf yaa ilaalamuu kaasaniiru.
Adeemsa qorannoo argame dhiheessuun ala Koreen Qorannoo suni dhimma kilabootaaf murtee kennuuf akka hin dandeenye kanuma dubbatee turedha.
Pirezidantiin Federeeshinichaa obbo Junaddii Baashaa argannoo ammaa kanaan ani kanatu balleesse jechuuf hin danda'u jedhani.
Koreen naamusaa federeeshinichaa dhimmicha sirnaan ilaalee gara dubbii qabutti muruuf hojii itti aanee hojjatu akka ta'e himan.
Bulchiinsi ol'aanaan kubba Miilaa Addunyaa Fiifaan dambii kubbaa ittiin too'atu waggaa ja'a dura baaseen kutaa ja'a keewwata 69 muraa 2 irratti taphataan kumuu taphicha qabxii isaa jijjiiruuf yaale,dhiibbaas taasise adabbiitu isa eeggata jedha.
Koreen dhimma Kilaba Hawaasaa fi Elektiriikii gidduu ture qoratemmoo tapha dursee yaaliin akka ture akeeka.
Suni koree naamusaatiin xiinxalli itti kennamuu akka danda'u dubbatan pirezidantichi obbo Junaddii Baashaa.
Mootummaan naannoo Oromiyaa federeeshinichi hatattamaan murtoo haqa qabeessa ta'e naaf yaa laatuu gaafachaatuma jira.
Yoo ta'uu dide bara 2010tti tapha biyyoolessaa kamirraayyuu of qoqqobuu akka danda'u kan dubbate.
Hogganaan Biiroo Dargaggoo fi Ispoortii Oromiyaa obbo Mootummaa Tamasgeen haqatu milkaa'uu dede waan ta'eef sana ilaalaa itti hin dhiifnu jedhani.
Taphataan Kilabni bulchiinsa magaala Hawaasaa adabe Efreem Zakkaariyaas ragaa ga'aarra dhaabbatanii mitii hima kan jedhu Koreen qorataa Federeeshinichaa.
Obbo Mootummaanimmoo akka ragaatti muul'annaan haalamee dubbatu. Kana boodayyuu federeeshinicha amanuun dhibaa ta'uu danda'aasi yaadni taliigichaa.
Federeeshiniin Kubba Miilaa Itiyiiphiyaa morkii taphoota liigiiwwan gara garaa bara 2010 geggeeffamuuf kilboonni dursanii akka of qopheessan,shaakalliis eegalan xalayaa itti barreessera.
Xalayaa kanaan Jimmi Abbaa Bunaa gara Suppar Liigiitti dhidhimuu isaa kan mirkaneessefi.
Geggeessaan kilaba Jimma Abbaa Bunaa obbo Girmaa Kabbadaa murtiin utuu hin laatamin xalayaan akkanaa waan fudhatama qabu mitii kaleessa bilbilaan odeeffanne.
Xalayaan kunimmoo kilaboota maraaf kan ergame qabxii amma isaan irra jiraniini jedhameera.
Pirezidantiin Federeeshinichaa obbo Junaddii Baashaa murtee koree naamusaa booda wanti jijjiiramu kan ilaalamu ta'us, ammaaf sagantichi Jimma Abbaa Bunaa addatti kan xiyyeeffannoo keessa galchu akka hin taane dubbisneerra.
Kilabni Jimma Abbaa Bunaa iyyata isaa gara Konfedereeshinii Kubba Miilaa Afrikaa Kaaf ergateera.
Dhugaa waanin qabuuf naaf yaa ilaalamuudha adeemsi isaa.
Geggeessaan kilabichaa obbo Girmaa Kabbadaa deebiin hatattamaa waan dhibeef Kaafiin geechee dubbatan.
Getaachaw Muul'ataatu gabaase.
Oduuwwan Biroo « Shaampiyoonichaan atleetonni Ityoophiyaa meetira kuma 5n ni eegamu	Dorgommiin meetira kuma 5 dubartootaa atleetonni Itiyoophiyaa irratti hirmaatan har’a galgala geggeeffama »